Maxaan u baranayaa Finnishka ama Iswidishka? - InfoFinland
Nolosha Finland > Luqada Finnishka iyo Iswidishka > Maxaan u baranayaa Finnishka ama Iswidishka?
Afka Finnishka waxaa ku hadla oo uu luqadooda hooyo yahay qiyaastii 87 % dadka Finnishka ah. Afka Iswidishka waxaa ku hadla oo uu luqadooda hooyo u yahay qiyaastii 5 % dadka Finnishka ah.
Markaad ka fikiraysid, ma ii dan baa inaan barto luuqada finishka ama iswidhishka, waxaad ku darsataa qorshaha luuqada ay ku hadlaan dadka dagan meesha aad dagan tahay iyo deegaanada kugu hareeraysan ama xeeran.
Haddii aad doonayso in aad codsato dhalashada Finland, waa in aad ugu yaraan afka Finnishka ama Iswiidhishka, luqada dhagoolaha Finnishka ama Iswiidhishka u taqaan heer lagu qanci karo.Marka aad codsaneyso jinsiyadda, ku lifaaq shahaada aqoontaada luqadeed. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan shuruudda luqada ka aqri bogga InfoFinlandi Shahaadada rasmiga ah ee aqoonta luqada.
Goobaha shaqo badankood waxaan laga maarmin aqoonta Finnishka. Haddii aad dooneyso in aad wax ka barato Finland, waa iska caddahay in aad u baahan tahay aqoonta afka Finnishka.
Waxaa haboon in aad barato Finnishka ama Iswidishka haddii aadan ku fekersaneyn xitaa inaad dalka deganaato mudo dheer. Inkastoo afka Ingiriiska Finland ku dhowaad si fiican looga yaqaan, hadana aqoonta afka Finnishka ama Iswidishka ayaa wax badan kaaga faa’iido badan.
Marka aad taqaano luqada waa kuu sahlan tahay in aad ku raaxeysato islamarkaasna la qabsato Finland. Waxaa kuu sahlan in arrimahaada aad ka dhameysato saraakiisha, la socoto wararka, dad barasho iyo in aad saaxiibo hesho.
Sida ugu fiican ee aad luqad ku baraneysaa waa inaad ku dhiirato ku hadalkeeda. Mar kasta uma baahnid inaad fahamto dhammaan, waxaa kugu filan inaad fahamto arrimaha ugu muhiimsan. Si geesinimo leh u gal goobaha aad ku hadli karto afka Finnishka ama Iswidishka.
Macluumaad ku saabsan Sharciga LuqadaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Degmooyinka luqadda Iswidishka iyo degmooyinka labo luqadood lagu hadloFinnish | Iswidish
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 30.12.2020 Boggan war-celin ka soo dir